Food & Baker | United Logistics Team Co.,Ltd. ﻿
7.2.2019, Full time , Logistics / Transport
Company: United Logistics Team Co.,Ltd.
To be the world leader in Logistics & supply chain services by
- Offering Just-In-Time & Door- To -Door services to our customers
- Expanding our network
- Globalizing our services range with logistics & supply chain solutions
- Offering scarce outsourcing solutions across the world
We believe in providing the best services to your needs , wants within the various Freight Forwarding & Logistics , transportation , delivering , warehousing to success and develop in your business with partnering ours services .
.- ferry provided
- other allowances.Established since 2003.Our customers gainutmost satisfaction from our teams of professionals known for their extensive experiences and expertise in customs clearance,warehousing,product distribution and land,sea and air modes of transporation.Our network is spread across3locations in Myanmar and6locations in major economies such as the Singapore and Thailand..Working Day ( Monday - Saturday )
Working Hours (9:00 AM - 5:30PM)
Off Day ( Sunday & Public Holiday )
•	ယဉ်ကျေးပျူဌာ၍ တက်ကြွသွက်လက်ရမည်။
•	ကော်ဖီ ဖျော်နိုင်ပြီး သင့်တော်သော မုန့်ပြုလုပ်တတ်ရမည်။
•	လက်အောက် ၀န်ထမ်များအား လိုအပ်သော training ပေးနိုင်ရမည်။
•	ဆိုင်အတွင်း/အပြင် သန့်ရှင်း သပ်ရပ်စေရန် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရမည်။
•	Customer များနှင့် ပြေလည်စွာ ဆက်ဆံတတ်ရမည်။
•	ပြသနာများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Menu သစ်များရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းကို Shift အလိုက်အလှည့်ကျဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
Work location No(38/40), 5th Floor,Shwe Bon thar(Lower Block),Pabedan Tsp, Ygn.
For Myawaddy and Hpa-An
Company Industry: Food & Baker
United Logistics Team Co.,Ltd.
74 Days, Full time , Logistics / Transport
.Vision To be the world leader in Logistics & supply chain services by - Offering Just-In-Time & Door- To -Door services to our customers - Expanding our network - Globalizing our services range with logistics & supply chain solutions - Offering scarce outsourcing solutions across the world Mission We believe in providing the best services to your needs , wants within the various Freight Forwarding & Logistics , transportation , delivering , warehousing to success and develop in your business with partnering ours services .
.- ferry provided - attendance bonus - other allowances
.Established since 2003.Our customers gainutmost satisfaction from our teams of professionals known for their extensive experiences and expertise in customs clearance,warehousing,product distribution and land,sea and air modes of transporation.Our network is spread across3locations in Myanmar and6locations in major economies such as the Singapore and Thailand.
.Working Day ( Monday - Saturday ) Working Hours (9:00 AM - 5:30PM) Off Day ( Sunday & Public Holiday )
244 Days, Full time , Logistics / Transport
•	ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာနိုင်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။
267 Days, Full time , Logistics / Transport
•	သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာနေထိုင်တတ်ရမည်။ •	ယဉ်ကျေးပျူဌာ၍ တက်ကြွသွက်လက်ရမည်။ •	အသစ်ဖွင့်မည့် Coffee Shop တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
Job ads in Food & Beverages/Bakery Jobs and in Kayin State
280 Days, Full time , Logistics / Transport
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ပြီးအသောက်အစားကင်းရှင်းရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တအထူးကောင်းမွန်ရမည်။
•	ယာဉ်အကြောင်းနားလည်သူ (engine,wairing အောက်ပိုင်း)။ •	နေ့စဉ်လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်ပြီး ယာဉ်များကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ •	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိပြီး ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိုင်ရမည်။ •	ယာဉ်များကိုစီမံခန့်ခွဲနို� ...
•	သွက်လက်တက်ကြွပြီးCommunication Skill အထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမည်။ •	အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင် နိုင်ရမည်။ •	ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း လိုက်နာနိုင်ရမည်။
•	သင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။ သန့်ရှင်းသပ်ရက်စွာနေထိုင်တက်ရမည်။ •	ယဉ်ကျေးပျူဌာ၍ တက်ကြွသွက်လက်ရမည်။ •	မြ၀တီမြို့နှင့်ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံမြို့နယ်တို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။
•	Must be good Problem Solving Skills, Communicational Skills, Technical Skills and Leadership. •	Must be able to administer well Coffee Shop. •	Must be Administrative issues and Personnel issues can properly problem solving. •	Must be served from Myawaddy
•	ရိုးသားပြီးအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	မိမိတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရသောလုပ်ငန်းအား ကောင်းမွန်စွာတာဝန်ယူ နိုင်ပြီး သွက်လက်ဖျတ်လတ်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ •	အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင� ...
Job ads in Logistics & Supply Chain Jobs and in Kayin State
301 Days, Full time , Logistics / Transport
•	ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာနိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Responsible for managing the operation team, developing coverage sales & coffee shop, revenue, and expense controls, meeting agreed targets, and expanding business. •	Achieve growth and hit operations targets by successfully managing the operation team. •	Design and implementastrategic business plan that expands company’s requirement base and ensure its strong presence for all operation system. •	Build and promote strong, long-lasting customer & Supplier relationships by partnering with them and understanding their need ...
Job ads in Senior Management jobs and in Kayin State
•	ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	မြ၀တီမြို့နှင့်ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံမြို့နယ်တို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။
•	Collect money from customer •	Transfer money and update bank statement by any requirements •	Record daily transactions in cash book •	Closing of daily cash book •	Record daily petty cash •	Record Advance Payments and loan •	Help and support any requirements
•	မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် Typing ရိုက်နိုင်ရမည်။ •	Admin & HR ပိုင်းအားဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	ဝန်ထမ်းရေးရာများ၊ လူမှုဖူလုံရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	Internet , email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	လူအများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက ...
•	မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် Typing ရိုက်နိုင်ရမည်။ •	Admin ပိုင်းအားကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	ဝန်ထမ်းရေးရာများ၊ လူမှုဖူလုံရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	Internet , email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	လူအများနှင့်ပူးပေါင ...
•	သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာနေထိုင်တက်ရမည်။ •	ယဉ်ကျေးပျူငှာ၍ တက်ကြွ သွက်လက်ရမည်။ •	မြ၀တီမြို့နှင့်ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံမြို့နယ်တို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။
305 Days, Full time , Logistics / Transport
•	သင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။ သန့်ရှင်းသပ်ရက်စွာနေထိုင်တက်ရမည်။ •	ယဉ်ကျေးပျူဌာ၍ တက်ကြွသွက်လက်ရမည်။
307 Days, Full time , Logistics / Transport
•	သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာနေထိုင်တတ်ရမည်။ •	ယဉ်ကျေးပျူဌာ၍ တက်ကြွသွက်လက်ရမည်။ •	မြ၀တီမြို့နှင့်ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံမြို့နယ်တို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။
312 Days, Full time , Logistics / Transport
•	စိတ်ရှည်သည်းခံ၍ ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Assistant For MD
•	Conceive and develop efficient and intuitive marketing strategies •	Leads and manages marketing department staff by providing tasks, objectives, strategies, and projects •	Monitors competitor activity and brainstorms potential improvements or changes in marketing strategy, products, or services •	Organizes and attends company-wide and marketing events •	Adheres to and implements company policies and procedures •	Proven experience as marketing executive or similar role •	Good understanding of market research techniques, dat ...
315 Days, Full time , Logistics / Transport
•	သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည် •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည် •	အဖွဲ့စည်းနှင့်လုပ်ကိုင်တတ်သူဖြစ်ရမည်
328 Days, Full time , Logistics / Transport
Food & Baker Food & Beverages/Bakery Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon United Logistics Team Co.,Ltd Food & Beverages/Bakery Jobs Food & Beverages/Bakery Jobs Food & Baker Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Chef De Partie(European Food / Asian Food)(Best Western Chinatown Hotel)
Chef (Chinese Food) (Code - 30422) M/F (5)
Admin Manager (Nilar Frozen Food)
CDP (Chef Departie) (Bakery)
Kayin State 267 Days
Chef (Chinese Food) (Code - 30422)
Naypyitaw City 14 Days
Thai Food Court Kitchen Helper
Mandalay Region 163 Days
Fresh Food Merchandising Manager
Mandalay Region 296 Days
Kayin State 298 Days
Yangon (Rangoon) 434 Days